Kulanka wafdiga ka socda GMDQ uu la yeeshay haweenka iyo dhallinyarada magaalada Beledweyne – GMDQ
Kulanka wafdiga ka socda GMDQ uu la yeeshay haweenka iyo dhallinyarada magaalada Beledweyne
waxaa furay mudane Ismaaciil Yaasiin oo ka mid ah wafgiga guddiga. Mudane Ismaaciil waxa uu ka soo qayb-galayaasha shirka uga mahadceliyay dadaalkooda iyo soo dhoweynta.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Calli jayte Cusmaan waxa uu guddiga uga mahad celiyay booqashada Beledweyne waxa uuna u ballan-qaaday wafdiga guddiga in reer Beledweyne ay si fiican ula shaqeyn doonaan. Sidoo kale guddoomiyuhu wuxuu si kooban uga hadlay taariikhda doorasho ee wadanka wixii ka danbeeyay burburkii dowladdii kacaanka. Waxa uu taariikhdan uga hadlay si uu dadka ugu bidhaamiyo heerarkii kala duwanaa ee waddanku soo maray iyo horumarka hadda la higsanayo sanadka 2020ka. Guddoomiyuhu wuxuu sidoo kale ka hadlay in ay muhiim tahay in la sameeyo tira koob dadweyne doorashada ka hor.
Dhankiisa guddoomiye ku xigeenka GMDQ mudane SayidCali Sheekh Maxamad oo hor-kacayay wafdiga Beledweyne tegay ayaa hadalkiisa ku billaabay u mahad-celinta dadka reer Beledweyne iyo maamulkoodaba. Waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin doorka haweenka ee bulshada iyo sida nidaamka hadda jira ay ugu dulmanyihiin haweenku. Waxa uu sidoo kale sheegay in sida keliya ee qof walba oo Soomaali ah uu xaqiisa ku heli karo in ay tahay doorasho qof iyo cod ah.
Guddoomiyuhu wuxuu sidoo kale aad u faahfaahiyay nidaamka sameynta iyo sharciyeynta xizbiyada siyaasadda. Ugu danbeyntii guddoomiyuhu wuxuu dadka ugu lab-qaboojiyay in waddan walba uu doorasho qabsan karo xaalad walba uu ku jiro.
Kasoo qayb-galayaasha shirka waxaa sidoo kale la siiyay cashar kooban oo maqal iyo muuqaal ah ku saabsan doorashooyinka.
KULAN WADATASHI UU GMDQ LA YEESHAY HAWEENKA IYO DHALLINYARADA
Intaa ka dib haweenkii iyo dhallinyaradii fadhiday kulanka waxaa la siiyay fursad ay fikradahooda ku dhiibteen ama ay su’aalo ku weydiiyaan wafdiga. Shamsa Ciise Aadam oo ah wakiilka wazaaradda haweenka ee gobolka Hiiraan ayaa tix suugaan ah kasoo jeedisay kulanka. Suugaanta waxa ay ku cabbirtay doorka haweenka ay ku leeyihiin horumarka bulshada iyo nabadda.
Cabdulwahaab Abuukar Xasan oo ah xubin ka tirsan ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan ayaa aad uga hadlay welwelka dhinaca amniga ah ee ka jira waddanka. Waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la hagaajiyo amninga inta aan la gaarin doorashada 2020ka. Sidoo kale wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in guddiga doorashooyinku uu aad ula shaqeeyo bulshada rayidka ah.
Farxaan Cumar Carte oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka Hiiraan ayaa dhankeeda ka hadashay muhiimadda amniga uu u leeyahay doorashada 2020ka. Waxay sheegtay in la daryeelo ciidamada qaranka si ay waddanka uga dhalinyaan amni suurta geliya in ay dadku ku dhiirradaan codeynta doorashada 2020ka.
Su’aalaha ugu badan ee dadku ay weydiinayeen waxa ay ku saabsanaayeen axzaabta siyaasadda taas oo muujineysa walwalka dadku ay ka qabaan in xizbiyada siyaassadu ay u xuub siibtaan qabiillo. Mudane Maxamad Maxamuud Xasan oo ka tirsan xafiiska diiwaan gelilnta xisbiyada ee guddiga doorashada ayaa u faahfaahiyay dadka sharciya iyo shuruudaha looga baahanyahay ururada siyaasadda inta aan loo aqoonsan xizbiyo siyaasadeed.
Ugu danbeyntii kasoo qayb-galayaasha waxaa loo qaybiyay kooxo waxaana loo qaybiyay su’aalo ay ka munaaqashoodaan. Munaaqasho ka dib koox walba waxay iska soo saartay hal qof oo shirka ka akhriyay fikradohooda iyo jawaabihii ay ka bixiyeen su’aalihii la siiyay.
Shirka waxaa soo xiray guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka isaga oo u mahadceliyay dhallinyaradii iyo haweenka shirka wadatashiga ah ka soo qayb-galay.